Ọwara California: njirimara, nhazi na ụdị ndụ dị iche iche | Netwọk Mgbasa Ozi
Taa, anyị ga-ekwu maka ya mmiri nke California. Ọ bụ ọdụdụ ọdụdụ ọdụ ọdụ mmiri dị n’elu ụwa anyị. O sitere na ya site na usoro ihe omumu na ngagharị nke efere n'etiti akuku oke osimiri Pacific na eriri nke mejupụtara kọntinenti America. Ọ bụ ebe obibi nke ọtụtụ ụdị dịgasị iche iche dị iche iche ma chebe ọtụtụ n'ime ya n'ihi ụfọdụ mmetụta dị adị maka mmadụ na ọrụ ha.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị gbasara njirimara niile, mbido na nguzobe nke Ọwara Oké Osimiri California.
2 Ihe ndi di iche iche nke Gulf of California
3 Mmetụta gburugburu ebe obibi na Gulf of California
4 Atụmatụ nchekwa
Ọ bụ ọdụdụ ọdụdụ ọdụdụ n’elu ụwa anyị. Isi mmalite ya sitere na mmegharị nke efere nke Oke Osimiri Pasifik na jikọrọ ọnụ nke mebere America. Mmegharị nke mbadamba ndị a nwere na-epelata ala nke oke osimiri dị ihe dịka afọ 12 gara aga. Oge ruru mgbe mmiri mmiri si na Pacific abanye na mgbago ugwu wee mechie ide mmiri niile. Site na mgbe ahụ, e guzobere proto-golfo. Efere a na-agbanwe obere obere na usoro mmejọ nke ala. Ka ọ dị ugbu a, mmejọ niile nke sistemu a na-agbasa site n'ọnụ Ọwara Oké Osimiri Kalifonia ruo na nsọtụ ebe ugwu ya. Ọ bụ ya mere na Baja California peninshula kewapụrụ kọntinent nke North America.
Usoro ahụ na-nwayọ nwayọ kama ọ na-aga n'ihu N'ime ọtụtụ ijeri afọ ọ ga - emesịa kewapụ kpamkpam. Ihe ọjọọ San Andrés bụ otu n'ime ihe a kacha mara amara n'ụwa ma ọ bụ ya na-ekewa akụkụ a niile. N'ime afọ ahụ, ọtụtụ nde afọ ejirila nwayọọ nwayọọ na-achịkwa Ọwara Oké Osimiri California. Mmiri osisi na anụmanụ nke mmiri dị iche iche nwere ebe obibi na ebe a.
Ihe ndi di iche iche nke Gulf of California
Ka ọ dị ugbu a, n'ihi mgbanwe ihu igwe na mgbanwe nke oke osimiri, a gbanwere ụdị ọdịdị dị iche iche. A ghaghi iburu n'uche na, kemgbe mmalite nke Osimiri Gulf nke California, enwere mgbanwe na ihu igwe nke kpatara mgbanwe nke oke osimiri, ufodu ihe omumu banyere ala nke meputara ugwu, uzo na agwaetiti, wdg. Mgbanwe ndị a niile metụtara ala na ihu igwe emeela ka Ọdọ Mmiri California bụrụ otu n’ime oke osimiri kacha baa ọgaranya na ụwa anyị. Ọ nwere ụdị dị iche iche dị iche iche na ọdịdị ala dị egwu nke jupụtara na agba dị iche.
Osimiri Gulf nke California na-enye usoro nke nnukwu agwaetiti n'akụkụ ndịda. N'ime agwaetiti niile, ndị kacha pụta ìhè bụ Ángel de la Guardia Island na Tiburon Island. Nnukwu nnụnụ dị iche iche na-akwụ akwụ na mpaghara ndị a ma a na-echebe ya. N'ebe ugwu ya, ọzara Altar na ọnụ mmiri nke Osimiri Colorado. Ọrụ nke Osimiri Colorado bụ inye mmiri na mmiri mmiri n'akụkọ ihe mere eme ebe ọ bụ na e guzobere Ọwara California. Ọnụnọ nke osimiri a enyela ọnọdụ pụrụ iche na mpaghara a dum. N'ihi nke a, e kwere ka mmepe nke agbụ nri siri ike na ọtụtụ flora na fauna.
N'ihi ọnọdụ niile anyị kwurula na ịdị adị nke osimiri a, e mepụtara ụdị dị iche iche na-adịghị mma na, ugbu a, nọ n'ihe egwu nke ikpochapu. N'ịbụ ụdị jupụtara n'ọhịa, naanị ya na-adị ndụ ma ha chọta ebe a. O bu otu n’ime ihe mere o ji di n’okpocha. Dika o nwere mpaghara nkesa pere mpe, o bu udiri ihe kariri ndi mmadu. Ọnọdụ nke ụdị anụmanụ dị egwu na egwu nke mkpochapụ bụ vaquita marina. Ọ bụ otu n'ime anụ ọhịa pere mpe dị adị ma na-ebi naanị na Gulf of California. A na-eme atụmatụ na enwere puku mmadụ ole na ole ugbu a, mana na ọnụọgụ a dị elu karịa nkebi mmadụ.
Mmetụta gburugburu ebe obibi na Gulf of California
Osimiri Colorado nwere ntakịrị mmiri na-abanye na mmiri nke Ọwara Oké Osimiri California. A ghaghi iburu n'uche na akuku buru ibu nke mmiri a na-aru oru n'ime oru ndi mmadu na mpaghara. Nke a kpatara ebe obibi nke ọtụtụ ụdị na-emebi ma na-adịgide ndụ nke ọtụtụ ụdị. Ka ọ dị ugbu a, etinyere mmemme mba iji nwee ike ịmụ ma chekwaa akụkụ buru ibu nke ụdị ahụ dị ka vaquita marina, yana anụ ọhịa ndị ọzọ dị ka whale blue, sperm whale, whale wolf na orcas. Ebumnuche nke mmemme ndị a bụ iji nwee ike ịhazi ọrụ mmadụ n'ụzọ ga-echekwa ebe obibi nke ọma n'ọnọdụ dị mma.
N'aka nke ọzọ, enwere mmetụta gburugburu ebe obibi nke mmepe nke ụlọ ọrụ ahụ mepụtara. Maka nchekwa kacha mma nke ụdị dị iche iche nke Ọwara Oké Osimiri California, e mepụtala otu ụlọ ọrụ ewepụtara maka ebe obibi na njem njem. Emepụtara ụlọ ọrụ ndị a n'ụzọ kwesịrị ekwesị n'akụkụ ndị nwere akụ na ụba kachasị ukwuu iji bịarute nso na okike ma mata banyere nchekwa nke gburugburu ebe obibi na ụdị dị iche iche. N'otu oge ahụ, ụfọdụ ebe ndị njem ọdịnala ọdịnala enweela ike ịgbasa ọrụ ha ka ha nwee ike ịnye njem dị mkpirikpi mana nke ọzọ n'akụkụ ecotourism na njem egwuregwu.
A na-eme ihe a niile iji mee ka ihe dị nso na njem nlegharị anya nke ọma na ọrụ dịka nnụnụ na azụ whale. Site n'ugwu gaa n'egwuregwu na kayak tinyere ịgba ịnyịnya ígwè na ugwu aghọwo ihe ndị mmadụ chọrọ.
Ebumnuche nke atụmatụ nchekwa bụ inwe ike ichebe Ọwara Oké Osimiri California ka o wee nwee ike ịnweta ma kwado usoro ndụ dị iche iche na-ejikọ ọnụ. Ihe bụ ihe ọzọ, Ebumnuche bụ na ha nwere ike ịwepụta ngwaahịa na ọrụ bara uru maka ọha mmadụ, na-enyekwa akụ na ụba mpaghara aka na-emetụtaghị gburugburu ebe obibi.
Enwere m olileanya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere Gulf of California na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Ọwara nke California